Tadalafil အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူ & စက်ရုံကိုဝယ်ပါ။
rating: SKU: 171596-29-5. အမျိုးအစား: ဟော်မုန်းမြှင့်တင်ခြင်းလိင်
Tadalafil အမှုန့်, tadalafil များ၏ကုန်ကြမ်း, များသောအားဖြင့်က tadalafil ဆေးပြားစေရန်အသုံးပြုခဲ့သည်, အဖြူရောင်အမှုန့်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ Tadalafil မူးယစ်ဆေး / Cialis ကိုခေါ် aslo, PDE-5 (Phosphodiesterase type ကို 5) inhibitors အဖြစ်လူသိများမူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်လူတန်းစားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ, (Raw Tadalafil (Cialis) အမှုန့် (171596-29-5)) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
ကုန်ကြမ်း Tadalafil အမှုန့် (Cialis အမှုန့်) ကိုဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း tadalafil (Cialis) အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Tadalafil (Cialis) အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 298-300 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင်မှုကို Temp: 20ºC
1.AASraw, ရော် Tadalafil အမှုန့် (Cialis အမှုန့်) ကိုထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့နိုင်''t ကိုဘုံနည်းလမ်းများအများစုအားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရလိမ့်မည်။
2.AASraw ရှာဖွေတွေ့ရှိမဟုတ်တဲ့နှင့်အတူကုန်စည်များအတွက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အသေးစိတ်ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်လမ်းညွှန်ပေးပါသည် (Cialis အမှုန့်) Tadalafil အမှုန့်.
Tadalafil အမှုန့် (tadalafil) ၏ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းသည်အဖြူရောင်အမှုန့်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ Tadalafil ဆေးသည် Cialis ဟုခေါ်သည်။ PDE-5 (Phosphodiesterase type 5) inhibitors ဟုလူသိများသောဆေးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ လိင်မှုမြှင့်တင်ခြင်း Tadalafil / Cialis သည်သွေးကြောများ၏ကြွက်သားများကိုဖြေလျှော့ပေးပြီးကိုယ်ခန္ဓာ၏နေရာဒေသများသို့သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးစေသည်။ Tadalafil / Cialis နှင့်အခြား PDE-5 inhibitors များသည်ယောက်ျားအားလိင်မှုကိစ္စကိုလှုံ့ဆော်သောအခါ erectile တုန့်ပြန်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ရှိအမျိုးသားများအားကူညီနိုင်သည်။ ဒါဟာ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ခွန်အားမရှိခြင်း) နဲ့ညင်သာပျော့ပျောင်းသောဆီးကြိတ် hypertrophy (ကျယ်ပြန့်ဆီးကျိတ်) ၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသရန်အသုံးပြုသည်။ လူများသည်များသောအားဖြင့်မြင့်မားသောသန့်ရှင်းသော tadalafil အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းမှ tadalafil အမှုန့်များကို ၀ ယ်သည်။ Tadalafil / Cialis အပြင်အခြားအတန်းအစားများဖြစ်သော Viagra (Sildenafil) နှင့် Levitra (Vardenafil) နှင့် Flibanserin တို့ဖြစ်သည်။
ဘယ်လို tadalafil အမှုန့်အလုပ်ကိုမ
PDE5 erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေခံစားနေရပြီးအရှိဆုံးလူတို့သညျတှငျတှေ့အနေနဲ့အင်ဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ cGMP, ဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာတဲ့စိုက်ထူ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်သိသိ guanosine monophosphate - ဒါဟာအခြားအလွန်အရေးကြီးသောပစ္စည်းဥစ္စာဖိနှိပ်။ cGMP မှကျေးဇူးတင်ပါသည်သင့်ရဲ့တင်ပါးဆုံတွင်းဒေသမှာရှိတဲ့အာရုံကြောနောက်ဆုံးတွင်အနေဖြင့်အချက်ပြနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်များလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပေါ်, သောအကျိုးဆက်, သင့်ထွင်ထားတဲအတွက်သွေးကြောတန်းစီချောကြွက်သားပြေစေပြီး။ ရလဒ်အဖြစ်ပိုမိုအသွေးတော်က hard နှင့် engorged ဖြစ်လာအောင်, သင့်လိင်တံ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းလိုဏ်ဂူအဆောက်အဦများဖြည့်စွက်, သူတို့ကိုမှတဆင့်စီးဆင်းနိုင်ပါတယ်။ အလွန်အကျွံ PDE5 နှင့်မလုံလောက်ဘူး cGMP ရှိပါတယ်အခါသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ရိုးရှင်းစွာတစ်ခုစိုက်ထူရရှိရန်ပြည့်စုံသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအတွက်ရလဒ်များအရာ, သင့်အာရုံကြောနောက်ဆုံးတွင်မှလာသည့်အချက်ပြမှုများ decipher လို့မရပါဘူး။
သငျသညျ 36 နာရီ Cialis / tadalafil အမှုန့်ကိုယူပြီးဖွင့်သောအခါ, 5-15 မိနစ်ကဲ့သို့တိုတိုအတွင်းသာမန်အဆင့်ဆင့်မှ cGMP ပြန်လာ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအောင်မျှမျှတတလျင်မြန်စွာသင့် system အတွက် PDE45 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုလျော့နည်းစေသည်။ ပိုဆိုးရ - Tadalafil ၏ဝက်ဘဝကိုအတော်လေးတိုအဖြစ်သို့သော်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု PDE2 ပြန်လာနှင့်သင့်လိင်ကျန်းမာရေးအောင်5ကာလ၏သင်တန်းကိုချွတ်ကျီ။ သငျသညျနေ့စဉ်အနိမ့်အစွမ်းသတ္တိကို Cialis / tadalafil အမှုန့်ကိုယူပြီးကြသောအခါဆန့်ကျင်တွင်, သင်သည်နောက်တဖန်လိင်ပျော်မွေ့ဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောအခွင့်အလမ်းပေးခြင်း, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ cGMP ၏ကျန်းမာအဆင့်ဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကူညီပေးသည်။ ဒါဟာအလုပ်လုပ်စတင်ရန်အနိမ့်အစွမ်းသတ္တိကို Cialis 4-5 ရက်ပေါင်းကြာ, ဒါကြောင့်အလွန်ပထမဦးဆုံးဆေးလုံးကိုယူပြီးနောက်ကိုမှန်ကန် macho သို့လှည့်ရန်မျှော်လင့်ထားပါဘူး။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်နေ့စဉ် Cialis / tadalafil အမှုန့်ယူပြီးစောင့်ရှောက်အဖြစ် - သို့သော်ကောင်းသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသင်သည်နောက်တဖန်အိပ်ရာအတွက်မဆိုအခက်အခဲများတွေ့ကြုံခံစားဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။
မှန်ကန်စွာ tadalafil အမှုန့်ကိုယူဖို့ကိုဘယ်လို
ကုန်ကြမ်း tadalafil အမှုန့်အဓိကအား tadalafil ဆေးပြားများ၏ပုံစံများအတွက်ဈေးကွက်ထဲမှာလာ; သငျသညျ tadalafil ယူရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါတောင့, yuou သင်တို့အလိုရှိသညျအတိုငျးဆေးထိုးညှိသင့်ပါတယ်။
အများဆုံးတစ်ဦးချင်းစီအဘို့, tadalafil ၏အကြံပြုစတင်ထိုး 10 တစ်နေ့လျှင် MG ဖြစ်ပါသည်, များသောအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု (အသုံးပြုရန် tadalafil လိုအပ်ကဲ့သို့) မတိုင်မီ 30minutes ယူ။ တစ်ရက် MG တုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏လုံလောက်မှုပေါ် မူတည်. ဆေးထိုး 20 မှတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ MG သို့မဟုတ်5မှယုတ်လျော့လေ၏။ tadalafil ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနာရီ 36 အထိကြာရှည်စေနိုင်သည်။ tadalafil ၏အသွေးအဆင့်အတန်းကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းဆေးယူပြီးသူတစ်ဦးချင်းစီ 10 နာရီအတွင်း 72 မီလီဂရမ်စုစုပေါင်းထိုးထက်မပိုသင့်ပါတယ် (မူးယစ်ဆေး interaction ကကိုကြည့်ပါ) ။ တစ်ချိန်ကနေ့စဉ်အသုံးပြုရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့် ပတ်သက်. မရှိဘဲအကြံပြုထိုးမီလီဂရမ်ကိုနေ့စဉ် 2.5 မှ5ဖြစ်ပါတယ်။ Tadalafil နေ့စဉ်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးယူမရသင့်ပါတယ်။
အရေးကြီးမှတ်ချက် - သွေးဖိအားကိုလျှော့ချနိုင်သောကြောင့် Cialis ကိုနိုက်ထရိတ်နှင့်မသောက်သင့်ပါ။ ဤသည်နှင့် PED48's များအားလုံးကိုရှောင်ရှားရန်လိုအပ်သောနိုက်ထရိတ်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် Cialis မသုံးမီနိုက်ထရိတ်များကိုအနည်းဆုံး ၄၈ နာရီကြာမသောက်သင့်ပါ။
ရောင်းရန် Tadalafil အမှုန့်
ဒေသခံဆေးဆိုင်သို့မဟုတ်ဆေးရုံတွင် tadalafil ဖြစ်သော cialis ကိုအလွယ်တကူတွေ့နိုင်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါဒလားဖီးလ်အမှုန့်ပဲ - ED ကုသမှုအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ်အများဆုံးအသုံးပြုတာတစ်ခု၊ များသောအားဖြင့်ဆေးပြားများသို့မဟုတ်ဆေးပြားများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ အခြားအဖြစ်အပျက်များ၊ :
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသကြားလုံးအဘို့အ Tadalafil အမှုန့်
Tadalafil ကိုအမျိုးသားများရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ကိုမြှင့်တင်ရန်သာမန်သကြားလုံးများပြုလုပ်ရန်သကြားလုံးများတွင်ထည့်နိုင်သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသကြားလုံးများစွာရှိသည်။ အဓိကပါဝင်သောပစ္စည်းများမှာများသောအားဖြင့် tadalafil အမှုန့်နှင့် sildenafil အမှုန့်များဖြစ်သည်။
လိင်ကော်ဖီအဘို့အ Tadalafil အမှုန့်
စျေးကွက်မှာတော့လိင် coffee.Mainly ပါဝင်ပစ္စည်းများအချို့ကိုမျိုးများသောအားဖြင့်ရှိပါတယ်နေကြသည်: အုန်းနို့, ပျားရည်, သစ်ကြံပိုး, Cacao, Maca.Sex ကော်ဖီကတစ်ဦး Aztec လှည့်ကွက်နှင့်အတူသောက်၏နှောင်းပိုင်းတွင်-type အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအရသာအနည်းငယ်စပ်ပေမယ့်မည်သူမဆိုရဲ့အရသာဘူးသီးမှအယူခံဖို့လုံလောက်သည်ချို၏။ ဒါဟာလိင်ကော်ဖီထိရောက်စွာသင့်ရဲ့လိင်စိတ်မြှင့်တင်ရန်အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများရှိပါတယ်။ Maca, Cacao, သစ်ကြံပိုး, ပျားရည်နှင့်အုန်းနို့စုပေါင်း, ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်ရန်ကူညီသုတ်ရည်ရဲ့အရည်အသွေးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, သွေးဆုံးနှောင့်နှေး, နိမ့်သောအသွေးကိုသကြား, လုံတိုးတက်စေခြင်းနှင့်လိင် drive ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
Tadalafil အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို; AASraw ထံမှ Cialis အမှုန့်ကိုဝယ်